It is me. Ko Niknayman.: အသိပေးကြေညာချက်။
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မတရားတဲ့ အမိန့် မှန်သမျှကို ရဲရဲဝန့် ဝန့် ဆန့်ကျင်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် အသိစိတ်ရှိရှိနဲ့  ငုံမခံဘဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြီး တော်လှန်သွားမှာပါ။ ပြည်သူတွေအားလုံး အရင်နေ့ များလို လမ်းမပေါ်ဆက်ထွက်ကြမှာပါ။ အားလုံးကိုလည်း အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပြောလိုပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 9:03 AM